Izibuyekezo umnyango laminate ngokuvamile ukwamukela omuhle, ngenxa design yabo engavamile. Esikhathini ukukhiqizwa lezi onobuhle sebenzisa inhlanganisela izinto, kangangokuthi high nokwethembeka. A ezihlukahlukene onobuhle - isiqinisekiso sokuthi zonke ikhasimende uzothola umklamo ezifanele nezidingo zayo.
Kungani udinga laminate?
Lokhu ukhuni ukucutshungulwa ubuchwepheshe ikuvumela ukuze kunwetshwe impilo yayo. essence yayo itholakala iqiniso ukuthi ebusweni ukhuni embozwe ifilimu okhethekile emshinini, okuyinto ke abethela bedle Ukushisa kulandzelana nekuhlunga tinsita. Ngenxa yokwakheka resin ifilimu ekhona ngokuphelele enamathiselwe kobuso izinkuni, ukuze iminyango abe ukubukeka lemukelekako. Yona kanye ifilimu ngoba yokuvikela ngocwazi kungaba matte, ecwebezelayo, nge ezihlukahlukene imiphumela zokuhlobisa elikuvumela ukuthola isisombululo sanoma yikuphi ingaphakathi. Film sici ukuthi ngokuphephile umboza ngisho emagumbini iqabunga umnyango, okuyinto umphumela ubukeka okuqinile nobunye. iminyango laminated kuthiwa kulekelelwa namantombazane futhi ifaka eyenziwe ezinye izinto, ingilazi, zensimbi enziwe.
iminyango laminated zinokwethenjelwa futhi iqine, futhi zidonse ukunaka kwanoma abathengi intengo imali. Yingakho izibuyekezo iminyango ezinhle laminated. ukusebenza eyingqayizivele kanye ukuyikhokhela ifinyelele inani eliphansi ngezinto zemvelo futhi polymers yesimanje kanyekanye. Ngokuya design, lezi iminyango akhiwe izingxenye eziningana:
ohlakeni lokhuni. It is wadala ikakhulukazi zikaphayini okuqinile, eliphumela kukhwalithi ephezulu nokwethenjelwa. MDF umnyango laminate ningabaleli laminated yokwakha yaseGrisi amapulangwe ngesimo ezilahliwe, oxhumene by ubuchwepheshe ekhethekile, ngenxa lapho impahla lokugcina amelana umswakama, lokushisa ukweqisa. onobuhle Abaningi anemisila ezengeziwe MDF emapheshana ukuxhumanisa i "amaseli". Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukuba sifinyelele namandla high ngenkathi sigcina isisindo eliphansi isakhiwo umnyango.
Filler. Injongo yalo - ukuba babe neqhaza ukushisa eyengeziwe kanye ukwahlukanisa umsindo. kuvame kakhulu ukuba kusetshenziswe njengendlela yamathebhu uvolo amaminerali, polyurethane foam, amakhadibhodi lukathayela.
Pad MDF. Kudaliwe kusuka uthuli onomfutho, exhunywe yinye nge ishidi ingcina kanye okwalandela ngokucindezela ngaphansi ukushisa. Cover ipuleti tingentiwa kwanoma iyiphi ukuma nokwakheka, it is ethe njo uzimele.
ungqimba zokuzivikela zokuhlobisa. iminyango laminated noma veneered imbozwe ekhethekile zokuhlobisa ifilimu fineness, ngezinye izikhathi ngokuhlanganiswa ungqimba ayisivikelo laminate. Umdwebo we ifilimu wenziwa inqubo lokushisa-cleaner.
Inhlanganisela izinto kuphumela yokuthi iminyango laminated okuhlala kanye ukumelana ukucindezeleka mechanical. Lezi zimo zokuma ngokuvamile waphawula kanye nokubuyekeza.
Laminated iminyango ingaphakathi ukunikeza izinzuzo ezilandelayo:
iphethini okuyisidina ukuthi sisetshenziswa nombala;
ukumelana nokushintshashintsha kwezinga lokushisa;
ukuphepha Environmental: hhayi ithuba lokuthi lezi onobuhle ezibekwe ezikhungweni zezempilo.
Izibuyekezo ezingezinhle iminyango laminated wathola ngenxa izici eziningana. Ngokwesibonelo, e ukubuyekeza yabathengi kukhona umbono ukuthi iminyango ezinhle iyabiza, futhi analogue eshibhile uyokhonza ekuqineni iminyaka 5-6. Futhi lapha kuvela, hhayi kakhulu umnyango base impahla, njengokungathi laminate - ifilimu ngempela eliphezulu akuyona ezishibhile. Eyesibili umzuzu engiwukhumbulayo owawungemnandi - ukungakwazi ukubuyisela ikhava laminated uma safike zonakala. Futhi isixhumanisi umpofu kwezakhiwo laminated - umnyango Uhlaka, esibonakala by ukujiya enganele futhi kalula likhubazeke. Ikakhulukazi ngokucacile lokhu kuntuleka obonakalayo uma ufaka izakhiwo ezifana egumbini lokugezela lapho zihlatshwa umswakama ibhokisi egoba ngokuhamba kwesikhathi, nokuthi umnyango ayisaxhunyanisiwe ivaliwe.
Yokwakha yaseGrisi noma laminate?
Noma yimuphi umnyango - veneered noma laminated - yabakhanga kahle wacabanga yonke imininingwane. Noma kunjalo, azihlukile kakhulu ngokuya ukubukeka kanye nomklamo ukwakhiwa, kodwa izindleko iphezulu kakhulu onobuhle veneered.
Uma siqhathanisa lezi izinhlobo design, singenza iziphetho ezilandelayo:
Qualitative iminyango laminated amelana okushisa aphakeme kanye nomswakama, kanye ungqimba zokuzivikela kuphuma lonke ifilimu esekelwe ngokuthi i-polymer eliqinile ukuze uketshezi. umnyango Veneered izakhiwo ezinjalo abakwazi ukuqhosha ukuthi Izibuyekezo eziningi ukusho.
iminyango laminated zinezikhathi ukumelana umonakalo, nakuba practice kuvela ukuthi konke kuncike umthwalo umenzi kanye izinga imikhiqizo. Ukuze ezokuzwisisa, ukuthemba abakhiqizi othenjwayo.
ukunakekelwa Easy. Ukuze camera laminated ifilimu izakhiwo ukuze anakekele eziningi kulula, ngoba ezindaweni zawo abushelelezi futhi livikela bonke Abrasives.
Yokwakha yaseGrisi noma laminate: izici ngokuqhathanisa
Laminated noma iminyango veneered kangcono? Lo mbuzo wabuzwa abathengi abaningi. Sinenkosi ukufana okuthile. Ngokwesibonelo, ukwakhiwa yangaphakathi ezimweni zombili wenziwe ohlakeni lokhuni ne ukugcwaliswa "amaseli" noma slats sokhuni. imodeli Veneered yabakhanga abathengi isakhiwo eziyingqayizivele ukhuni wayeqhubeka baze bahilela zesivikelo sesifuba. Nokho, ebusweni onobuhle ezifana mnyama ngokuhamba kwesikhathi, futhi uma igumbi zinomswakama ke umnyango nhlobo lungaqhekeza. Laminate - i material yokufakelwa, ebonakala amandla, ukumelana umonakalo lokukhanda futhi umswakama. Ukunakekela lezi iminyango kulula futhi elula, kodwa uma ngokungazelelwe phezu kube ukuba aqhephukile noma emibi, abakwazi zisuswe. Zonke izici kokubili izinto kungenziwa okwethulwa ifomu tabular:
It is wadala kusuka uxhaxha kwanoma yimuphi umuthi.
Uma kwenzeka izinto ebusweni zingancishiswa.
Ubuchwepheshe ukukhiqizwa ikuvumela ukudala onobuhle ehlotshiswe geometry eziyinkimbinkimbi.
I izakhiwo yokugaya ukhuni njengoba ushintsho msebenzi.
izingxenye Lwalugobile nzima ukumboza yokwakha yaseGrisi.
Ngokuhamba kwesikhathi, ebusweni umnyango buphela futhi mnyama.
Iminyango kungenziwa aboshelwe ezindaweni umswakama ongaphakeme.
Izindleko eziphezulu zokuthola izidingo izimpahla.
umbala unomphela kanye ukuthungwa.
Ukumelana nokuhuzuka, ukucindezeleka mechanical.
Nge eqinile ezilimele ke ngeke ibuyiselwe.
Eliphezulu laminate flooring akuyona ezishibhile.
Zonke onobuhle yohlobo olufanayo mayelana design.
Ngesisekelo le etafuleni, uyobona kalula siqonde ukuthi iyiphi inketho ekufanele.
Lesi sakhiwo - omunye ezingezwakali kakhulu endlini yethu, ngakho ukhethe indlela yokuqedela kuyadingeka ukuze ngokuphumelelayo. Ikakhulukazi kudingeka sinake kukhethwa umnyango. Kuyacaca ukuthi evamile imodeli ingaphakathi ngeke isebenze lapha. Ochwepheshe ukweluleka sinake laminated iminyango egumbini lokugezela, ahlangabezana nezimfuneko eziningana:
Ziyakwazi ukumelana ukuze umswakama kanye lokushisa izinguquko.
Musa deform njengoba ukusebenza.
onobuhle Veneered ezibukeka mnandi futhi eziqinile, hhayi lesikahle for yokugezela, ngoba wadala ngokhuni. Bona ingafakwa kuphela ezindaweni lapho ukuchayeka umswakama emnyango kuyoba esincane. Ngaphezu kwalokho, indima ebalulekile udlalwa ngu ikhwalithi enamathela lacquer. Yalutho nokuningi okuthembekile ukuthenga iminyango laminated yokugezela.
Kukhona izinhlobonhlobo eziningana dverey- "laminate":
Amamodeli nge paper-based. Yiqiniso, bona ungakhethi yokugezela ngoba kuyashesha kakhulu iphepha Soggy futhi sikhubazekile.
iminyango laminated nge ucwecwe iphepha, ukuba afuthwe ngesibulali compounds ezikhethekile livikela kakhulu umswakama, ngakhoke ingasetshenziswa yokugezela. Ngenxa imikhiqizo enamathela bavikelekile umswakama, kodwa futhi ukuxhumana ngqo amanzi kufanele kugwenywe.
Camera noma laminate laminated iminyango yokugezela wathola Izibuyekezo omuhle njengoba ukhetho enokwethenjelwa kakhulu. Noma laminate - imvelaphi impahla polymeric okuyinto sisetshenziswa ungqimba eqinile futhi kakhulu umswakama ukumelana.
a engabizi futhi, ngaphezu kwalokho, isixazululo onokwethenjelwa noma iliphi igumbi - Njengoba is, iminyango laminated ezaziwayo. Uhlaka lezi onobuhle wadala ngesisekelo izingodo zikaphayini, futhi eliphezulu izinto asetshenziselwa ukugcwalisa. Konke lokhu kwenza abathengi yasekuqaleni ethandwa kangaka futhi enokwethenjelwa laminated iminyango. Photo ebonisa ukuthi wonke amamodeli unayo i ukubukeka ezithakazelisayo, ngakho konke uzokwazi yimuphi elingaphakathi. Khetha imodeli for ekudwetshweni ingaphakathi okudingekayo ukuze ngokuphumelelayo:
Kuyadingeka ukuba acabangele isinqumo isitayela lapho igumbi elithile senziwa.
Awubalulekile kokulondoloza, ngoba uzokhetha imikhiqizo izinga incike UKUQINA ukusebenza kwawo.
Kudingeka ungacabangi kokuvula uhlelo. iminyango ingaphakathi Modern laminated, ukubuyekezwa zazo ezinhle ngokuvamile eziningi, kwenziwe embodiments ezihlukahlukene, indlela ukuvulwa. Ngokuvamile, kubonelelwa kakhulu ama- iminyango ensikeni, enziwe elilodwa noma amabili izindwani. Uma igumbi elincane, kungenzeka ukuba makudle iminyango beya, okuyinto ngokuvumelanayo alingeni kunoma yiziphi isikhala. Uma ekamelweni yakhelwe, isibonelo, isitayela ezweni, ungakhetha umnyango-inkositini.
Iminyango laminated ingaphakathi wathola Izibuyekezo ezinhle futhi ngenxa kuphela ehlukene. Yokuvikela ngocwazi kungase kwenziwe izinto ezahlukene - izinkuni, masonite, aluminium, plastic noma iphepha esekelwe fibre ingilazi. imodeli ngamunye yokuqala ngendlela yalo, futhi choice of indaba isithinta kanjani ngaphandle kuphela izindleko sokugcina imodeli.
Izinto zesimanje emakethe linikeza ezihlukahlukene imodeli laminated. Laminated MDF iminyango ithole ezinhle Izibuyekezo sibonga ezingabizi izinga okusezingeni eliphezulu model. Umklamo onobuhle ezifana ilula futhi siqukethe luhlaka umnyango egcwele "amaseli", asezindongeni kanye MDF camera laminate. Ukusebenzisa lona ubhekene MDF kunciphisa onobuhle izindleko.
Plastic iminyango laminated athandwa ngenxa sekugcineni izinga. Ngo womshini zabo dvuhhromny laminate noma ezinye izinto, eliqinile elibuye ifilimu camera mbumbulu izinkuni. Lezi iminyango ingaphakathi Uthole eziningi Izibuyekezo ezinhle ngenxa izici eziningana:
Excellent umsindo ukwahlukanisa izakhiwo.
Zonke lezi zici zenza i-ethandwa plastic iminyango laminated. Isithombe esibonisa ukuthi imodeli zingenziwa nge obunamaparele ingilazi imibala ehlukene, obanika i look wokuqala. onobuhle okunjalo kuyoba eside, ngoba ukugcina ukuma ngisho nalapho eqhuba ngaphansi kwezimo umswakama high. Umbala futhi ukuthungwa iminyango plastic uzohlala isikhathi eside, ngakho emva kokufakwa ungakwazi esikhathini eside ukuba bayakhohlwa esikhundleni kungenzeka kohlelo umnyango. Kubalulekile ukuthi onobuhle ezifana azibizi.
Njengoba sekushiwo, iminyango ingaphakathi MDF laminated Izibuyekezo lingama ezinhle, kanye plastic imodeli ezisekelwe. Ngokuphathelene ukufakwa kwabo, udinga ukukhumbula ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. Okubaluleke kakhulu, ukuthi akufanele sikukhohlwe yizingxoxo esihle umnyango Uhlaka, okungase zikhubazekile ngisho ngaphansi kwethonya Foam nge ingcindezi hhayi eningi kakhulu. Yingakho uzimele umnyango kufanele bufakwe emcimbini wokuvulwa ezindaweni ezikhethekile. Basuke efakwe zonke cm 30, ukugwema ukusonteka of umnyango.
Uma ufaka imikhiqizo laminate umnyango egumbini lokugezela kudingeka bavikele ibhokisi kusuka umswakama. Kungcono namathisela phezu nge ungangenisi amanzi alo ifilimu okhethekile. Kuzo zonke ezinye amaphuzu yenqubo yokufaka umnyango ilula futhi kuqondile. Futhi khumbula ukuthi ngisho ngokuhle obandayo laminated iminyango ingahlala esikhathini esingeside kakhulu, ikakhulukazi uma ukhetha amamodeli eshibhile. Izibuyekezo umnyango laminate kwadingeka ezinhle, kodwa kufanele ukhethe imodeli ne ingqondo.
Izicathulo ne isithende obukhulu: ifa kagogo, noma ukuthambekela fashion?
Ukuhlaziya imvelo sangaphakathi ibhizinisi
Clematis ngoba Urals. Okunhlobonhlobo. Izici kulinywe